IJetBlue iphinda iqale ngenqwelomoya ukusuka eSan Jose ukuya kwisiXeko saseNew York
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » IJetBlue iphinda iqale ngenqwelomoya ukusuka eSan Jose ukuya kwisiXeko saseNew York
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Uhambo ngenqwelomoya lumele ukubuyela kwakhona kwinkonzo yesibini ende yeJetBlue eSJC okoko kuyekwe okwethutyana inkonzo kwisikhululo seenqwelomoya ngo-Epreli 2020 ngenxa ye-COVID-19.
UNorman Y. Mineta San José kwisikhululo senqwelomoya esiya eNew York kwisikhululo senqwelomoya samazwe aphesheya iJohn F. Kennedy kwiJetBlue engapheliyo ngoku.
IsiXeko saseNew York lulongezo olufike ngexesha elifanelekileyo kwaye lwamkelekile kwinkonzo yeJetBlue ebuyayo eSan José.
Inkonzo ebuyayo iza kanye kwiiveki ezimbini emva kokuba iJetBlue iphinde yaqala ngenqwelomoya phakathi kweMineta San José kunye neBoston Logan International Airport.
Amagosa e- UNorman Y. Mineta Isikhululo senqwelomoya saseSan José (SJC) namhlanje bhengeza ukubuya kwe JetBlueInkonzo engapheliyo kwiNew York Isikhululo senqwelomoya iJohn F. Kennedy (JFK). Ukubhabha ngamehlo abomvu kusebenza amatyeli amane ngeveki, ngoLwesine, ngoLwesihlanu, ngeCawa nangoMvulo.
Ukuhamba okucwangcisiweyo ngobu busuku kushiya iSan José nge-10: 50 PM ukukhwela inqwelo moya yeAirbus A321 kwaye kulindeleke ukuba ifike ngomso eNew York ngo-7: 22 AM (EST) emva kweeyure ezi-6 zexesha lokubaleka.
"ISixeko saseNew York sisongezo esisexesheni nesamkelekileyo kwinkonzo ebuyayo yeSan José yeJetBlue," utshilo uJohn Aitken, uMlawuli weSikhululo senqwelomoya saseMineta San José. “Isimo sezulu esishushu kunye nokuphumla kwezithintelo ze-COVID kuzisa abantu abaninzi kwizitishi zethu, kwaye sonwabile kakhulu ngoku ukunikezela eli khonkco lithandwayo, lingapheliyo phakathi kweSilicon Valley kunye neNew York Metro Area. Olu luphawu oluhle lokuba sihamba ngendlela elungileyo, kwaye siqhwabela izandla iqela leJetBlue ngokuphendula kwimfuno ngokwenza olu tyalomali apha. ”
Inkonzo ebuyayo iza kanye kwiiveki ezimbini emva kokuba iJetBlue iphinde yaqala ngenqwelomoya phakathi kweMineta San José kunye neBoston Logan International Airport (BOS) nge-10 kaJuni, ibonisa ukubuya okwamkelekileyo kohambo lomoya olude oluya eSilicon Valley.